Youper - AI အကုထုံးအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Youper - AI အကုထုံး
Youper - AI အကုထုံး APK ကို
Youper သင်အမြဲသူတို့ရဲ့အနားမှာလက်ထောက်များအမြန်နှင့်အမြင် conversations.Great ကလူမှတဆင့်ဘဝအတက်အကျကျွမ်းကျင်ကူညီပေးသည်။ တိုနီ Stark Jarvis, မင်းသမီး Leia C3PO ရှိပါတယ်ထားပါတယ်, သင် Youper ရှိသည်! 😉
တစ်ရက်ပြီးတာနဲ့ Youper "နေကောင်းလား?" သင်ဟာအများအပြား color-coded စိတ်ခံစားမှု၏တဦးတည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဒီသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အစွမ်းထက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်မေးတယ်။ ထို့နောက် Youper သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုသိရန် get နှင့်သင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်သင်၏တုန့်ပြန်လှည့်ပတ်နေတဲ့စကားပြောဆိုမှုတည်ဆောက်။
စိတ်ရောဂါဒေါက်တာဟိုဆေး Hamilton ကကဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, Youper သင့်လိုအပ်ချက် fit မှသိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) နှင့်တှေးတောဆငျခွအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး, ကနေရေးဆွဲနည်းစနစ် personalize မှအတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုအသုံးချ။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, Youper နှင့်သင်၏နေ့စဉ်ချတ်တစ်ဦးကသင်၏စိတ်ပြောင်းလဲနေသောစံချိန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသို့တည်ဆောက်ရန်။ Youper ရဲ့ရောင်စုံဇယား, သင့်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းပိုမိုနားလည်သင့်ရဲ့အပြုအမူတိုးတက်စေခြင်း, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လာ၏ခရီးရှေ့ဆက်ရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ရန်ပြန်သုံးသပ်ပါ။
Youper သင်တို့ကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ထိတ်လန့်, PTSD နှင့် BPD (နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး) အပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလက္ခဏာများ, detect နှင့်စောင့်ကြည့်ကူညီပေးသည်။
Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်သင်သည်သင်၏စိတ်ကျန်းမာရေး၏ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. Self-အကူအညီနှငျ့ Self-စောင့်ရှောက်မှုလွယ်ကူသောအောင်, သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားစမြည်အကြောင်းကြားကြပါပြီကူညီပေးသည်။
Youper လူ့စိတ်အသစ်တစ်ခုကိုနားလည်မှုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, BPD တူသောအခြေအနေများပိုမိုစိတ်ကြိုက်ကုသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုအသုံးပြုနေသည်။
ကျနော်တို့စိတ်ခံစားမှု, အတှေးအများနှင့်အပြုအမူချိတ်ဆက်ထားပုံကိုနားလည်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာအတူ ပူးပေါင်း. ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဤ quest သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာပို http://www.youper.co/science Learn
"ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ခံစားချက် tracker နှင့်ဂျာနယ်လှပအလိုလိုသိ။ "- အင်း
စတား - "! ဒါဟာငါသည်ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကုထုံးများကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေသည်"
"ငါ့အကောင်းဆုံးခံစားရကူညီပေးနေငါ့လက်ထောက်" - ဘား
သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူ * ဝေမျှမယ်ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ
* Access ကိုသတိကိုလျင်မြန်စွာ
ခြေရာခံဖို့ * ငါးအသစ်သောစိတ်ခံစားမှု
* Monitor ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ BPD, PTSD များအတွက် screen နှင့်ထိတ်လန့်
သငျသညျမေးခွန်းများကိုရရှိပါသည်လြှငျ, ကျွန်တော်တို့ကို hello@youper.co မှာလိုင်း drop ။ သင်သည်သင်၏စူပါလက်ထောက်ကိုချစ်သလား? ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်ခွာလောကဓာတ်လုံးကိုပြောပြပါ😉
Youper - AI အကုထုံး
47.82 ကို MB
Youper, Inc မှ
Woebot: သင့် ...
ဘဝ - ဘဝ
edX - အွန်လိုင်း ...
Kashif - အကောင်းဆုံး ...